Ahiahy fanapoizinana :: Zaza mpirahavavy niaraka hita faty • AoRaha
Razana roa no indray natolotra ny fiana­kaviana. Indray namoy ny ainy ireto zaza­vavikely roa, iray tampo, fito taona sy folo taona. Tao amina toerana fandriam-bahiny iray teny amin’ny 67Ha Avaratra no nakana ny vatana mangatsiakan’izy ireo, afak’omaly maraina.
Nambaran’ny tompon’ andraikitra iray eo anivon’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) fa toa hoe: “noho ny fisotroana fanafody famonoana biby no nahafaty an’ireo zaza ireo”. Ny valin’ ny fizahana ny razana sy ny fanadihadiana hatao ihany anefa no hamaritana mazava ny tena antony marina nahafaty azy ireo. Mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) kosa ny renin’izy roa vavy kely, izay voalaza fa niaraka niharam-boina tamin’izy ireo.
Tsy nahazoana tatitra sy fanazavana momba an’ity trangana fahafatesana zaza roa ity ny polisy nidina teny an-toerana sy ny mpanao famotorana. Milaza ny solontenan’ny fianakaviana fa ny renin’ireo zaza ireo ihany no voatondro ho namono sy nampisotro fanafody azy ireo.
“Efa nisaraka, roa taona lasa izay, ny ray aman-drenin’izy mirahavavy. Nijanona tamin’ny rainy izy ireo. Tonga mijery sy mamangivangy azy ireo ihany ny reniny. Tonga tao an-trano itsy farany, tamin’ny zoma, naka an’ireo ankizy hoentina hitsangan­tsangana. Nandeha tao amina toerana fandraisam-bahiny izy telo mianaka. Niantso anay, ny marainan’ny sabotsy, ny tompon’andraikitra ao amin’ io toerana io nilaza fa maty izy roa vavy kely”, hoy ny fitan­taran’ny olona akaiky an’ireto niharam-boina.
Tonga haingana teny amin’ny 67Ha Avaratra ny fianakaviana. “Hita tao amin’ ny efitra nisy azy telo mianaka ny tavoahangina fanafody famonoana biby. Voalaza fa hoe ny renin’izy ireo ihany no nampandre ny tompon’ny hotely nilaza fa maty ny zanany. Izy kosa nandoa sy nalemi­lemy noho ny fisotroana an’io fanafody io”, hoy ihany ny fanazavana.
Milaza ny efa nametraka fitoriana eny amin’ny polisin’ ny BC ny fianakaviana. Saika nalain’ny polisy teny amin’ny hopitaly hoentina hatao fa­motorana ilay renim-pianakaviana voarohirohy, omaly, saingy tsy mbola afaka mandeha noho ny fitsaboana natao taminy.
Vono olona tany Toamasina :: Tovolahy roa maty voatifitry ny zandary
Voina an-dalambe :: Telo mianaka indray voadonan’ny fiara teny an-tsisin’arabe